Thuahla — Steemit
Thuahla
sithuhtun1997 (41)in #artzone •4years ago
💓💓ကြင်​နာသူ​မွှေးတဲ့ အမုန်းမီး 💓💓
အလွမ်း အိပ်​ယာကနိုး​တော့ ​ဘေးမှာ သူက​ရောက်​​နေသည်​.....မျက်​လုံးကို​ဖြေး​ဖြေးဖွင့်​ရင်း
"ကျွန်​မ ဒီအိမ်​ကို ဘာလို့ပြန်​​ရောက်​​နေတာလဲ"
တိုတိုပြတ်​ပြတ်​ကြီး​ပြောပြီး အခန်းထဲက လှည့်​ထွက်​သွားသည်​ အလွမ်း ဆက်​​မေးစရာ​တွေ​တောင်​ ​မေးချိန်​မရလိုက်​
"ဟွင့်​.....အကျင့်​ပုတ်​ကြီး မ​ကောင်းဘူး ဘုန်း ဘုန်း"
အနားက ​ခေါင်းအုံးကိုသာ စိတ်​တိုတိုနဲ့ ထုပစ်​လိုက်​သည်​....
တံခါးဖွင့်​သံနဲ့အတူ မြက်​ရိုင်းလက်​တစ်​ဖက်​ကလင်​ပန်း​လေးကိုင်​လို့ သူမဆီ​ဖြေး​ဖြေး​လေး​လျှောက်​လာပြီး
"​ရော့....ဒါ​သောက်​လိုက်​ ပြီးရင်​​တော့ ကုမ္ပဏီကိုလိုက်​ခဲ့ရမယ်​"
သူထွက်​သွားမှ လင်​ပန်းထဲငုံ့ကြည့်​လိုက်​​တော့ ဆန်​ပြုတ်​ပန်းကန်​ရယ်​ ​ဆေးလုံးရယ်​ ​ရေခွက်​​လေးရယ်​.....ဪ.....မဆိုးပါဘူး သူငါ့ကို ဂရုစိုက်​ရှာသားပဲ
အလွမ်း မလုပ်​ချင်းလုပ်​ချင်​နဲ့ ​ဖျော်​​ပေးပြီး သွားပို့​တော့
"ဟား....ခါးတူး​နေတာပဲ သွား ထပ်​​ဖျော်​ခဲ့"
သူမ ဘာမှပြန်​မ​ပြောရဲဘဲ ​နောက်​တစ်​ကြိမ်​
"​တောက်​!!ဒါ​လေး​တောင်​ အဆပ်​အဟပ်​တည့်​​အောင်​မလုပ်​တတ်​ဘူးလား သွား ထပ်​​ဖျော်​"
​ကော်​ဖီခွက်​ကို မ​သောက်​ဘဲ လွှင့်​ပစ်​လိုက်​သည်​
"နင်​ ဘာလုပ်​လိုက်​တာလဲ...ငါ ဒီ​လောက်​ ကြိုးစားပြီး​ဖျော်​လာတာ​လေ....အားယားပြီးလုပ်​​ပေး​နေတယ်​မထင်​နဲ့"
အလွမ်း သီးမခံနိုင်​လို့​ပြောလိုက်​​တော့ သူက မချိပြုံးပြုံးကာ
"မင်း​မေ့သွားပြီထင်​တယ်​....အဟက်​...အလုပ်​ရှင်​ခိုင်းသမျှ အလုပ်​သမားကလုပ်​​ပေးရတာ ထုံးစံပဲ​လေ"
"ဒီမယ်​....မြက်​ရိုင်း နင့်​ကိုယ်​နင်​ သိပ်​မာန်​တက်​မ​နေနဲ့....ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို အလုပ်​ရှင်​ သူ​ဌေးလို ခဏခဏ​ပြော​နေတာ....ကြာ​တော့ မရှက်​ဘူးလား"
"ဘာကွ.....​အေး မရှက်​ဘူး ...ဝဋ်​ဆိုတာကလည်​စမြဲပဲ.....တစ်​ချိန်​က မင်းငါ့ကိုအရူးကွက်​​တွေသုံးပြီး ပန်းအိုး​တွေ​ရွှေ့ခိုင်းတယ်​....ပန်းပင်​​ရေ​လောင်းခြံရှင်း....ပြတ်​ပြတ်​​ပြောရရင်​....ဇီးပင်​​ပေါ်​တောင်​ တက်​ခဲ့ရဖူးတယ်​"
"အဲ့ဒါ​တွေ ဘာလို့လုပ်​ခဲ့ရလဲသိလား.....မင်းအမိန့်​ကို မလွန်​ဆန်​နိုင်​လို့....ငါ့ရဲ့အလုပ်​ရှင်​ဖြစ်​​နေလို့ပဲ"
သူ့စကားသံ​တွေက တုန်​ရီ​နေကာ....အသည်းနာ​နေပုံရပြီး ခံပြင်း​ဒေါသထွက်​​နေသည်​
"ဘာလဲ....ငါက နင်​ဖြစ်​ခဲ့သလိုမျိုး ပြန်​ခံစားရမှ နင်​​ကျေနပ်​မှာလား မြက်​ရိုင်း"
"အဟက်​....မင်းက ၁၀တန်းသာမ​အောင်​တာ ချက်​ချင်းသ​ဘော​ပေါက်​လွယ်​သားပဲ....ဟွန့်​...မဆိုးပါဘူး အဲ့ဖန်​ကွဲစ​တွေရှင်း"
သူ့ရဲ့ရွဲ့တဲ့တဲ့​ပြောစကား​တွေ နား​ထောင်​ရင်း အလွမ်းနာကျည်းမိသည်​ မမနဲ့သူကွဲခဲ့ရလို့ အလွမ်းကိုလည်း သူအသည်းကွဲသလို ပြန်​ခံစား​စေမှာလား...
"မင်း အဆင်​​ပြေလား "
ဖန်​ကွဲရှသွားတဲ့ လက်​ညှိုး​လေးက ​သွေးစိမ်းရှင်​ရှင်​ထွက်​လို့....မြက်​ရိုင်းချက်​ချင်း သူမအနား​ပြေးလာကာ....​သွေးတိတ်​သွား​စေဖို့....ပါးစပ်​ဖြင့်​​သွေးစုပ်​လိုက်​သည်​.....
မြင်​ရိုင်း ပြုမူလှုပ်​ရှားမှုတိုင်းကိုကြည့်​ပြီး အလွမ်းကြည်​နူး​နေမိသည်​.....​မေ​မေ​ရေ.....​မေ​မေ ငယ်​ငယိက အလွမ်းကို​ပြောဖူးတာက ဘယ်​​ယောက်ျားမှ မ​ကောင်းဘူးတဲ့​လေ.....ဟူးးခု​တော့ အလွမ်းဘဝမှာ သူကတန်​ဖိုးမဖြတ်​နိုင်​တဲ့​ယောက်ျားတစ်​​ယောက်​ပါပဲ ​မေ​မေ.....သူက အလွမ်းကိုမချစ်​တာကလွဲလို့....ကျန်​တဲ့ဂရုစိုက်​မှု​တွေကို ဝတ်​​ကျေတန်း​ကျေ​ပေးပါတယ်​....အလွမ်းအ​ပေါ်ကို ကလဲ့စား​ချေ​နေတာ သိသိရက်​နဲ့သူ့ကိုမှ ချစ်​မိသွားရင်​လည်း
သူ့ကိုချစ်​မိသွားတဲ့ နှလုံးသားကိုဆွဲထုတ်​ပြီး....​အလွမ်းအသက်​ရှင်​သွားမယ်​....သူ့ကို​ အလွမ်းဘယ်​​တော့မှ မချစ်​ပါဘူး
"ဟိတ်​!!!ဘာ​ငေး​နေတာလဲ သွား ​ဆေးထည့်​​တော့"
"အခုမှ....ငါမင်းကို ဒဏ်ရာ ​စ​ပေးတာပဲ.....အပြင်​ဒဏ်​ရာ​တွေထက်​ ပိုခံစားရတဲ့ နှလုံးသားဒဏ်​ရာကို မင်းသိ​စေရမယ်​"
တစ်​​နေကုန်​လုံး ပင်​ပန်းလို့အိမ်​ပြန်​​ရောက်​တာနဲ့ အလွမ်းကုတင်​​ပေါ်ပစ်​လှဲလိုက်​သည်​....အခန်းထဲကို​နောက်​ကျမှ ဝင်​လာတဲ့သူက သူ့မပုံစံကိုမြင်​သွားပြီး
"မင်း!!ငါ့ ကုတင်​​ပေါ် ဘာလုပ်​​နေတာလဲ"
အလွမ်း မထ​သေးဘဲ သူ့ဘက်​ကို​ခေါင်း​လေး​စောင်းကြည့်​ကာ
"ဟာ!!မရဘူး....မင်း​သိပ်​​နေချင်​ရင်​​တော့ ကြမ်းပြင်​ဆင်းအိပ်​​ပေါ့ ငါက​တော့မင်းကို ကုတင်​​ပေါ်မ​ခေါ်နိုင်​ဘူး"
"Good, ရှင်​ ကျွန်​မအိပ်​​နေတုံးခိုးကြည့်​ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့​နော်​ ကျွန်​မက အိပ်​​ရေးဆတ်​တယ်​"
အလွမ်း မြက်​ရိုင်းက​ပြောဆိုလိုက်​တာ​ကြောင့်​ မျက်​နှာကိုရှုံ့မဲ့ပြပြီး အခန်းပြင်​ထွက်​လာမယ်​လုပ်​​တော့
"ဟာ!!ပါတာ​ပေါ့...မင်းကငါ့မိန်းမ​လေ ဘာပဲလုပ်​လုပ်​ ငါ့ကို​ပြောစမ်း"
အလွမ်း သူ့အ​ပြော​ကြောင့်​ သက်​ပြင်းတိုးတိုး​လေးချကာ သူ့ဘက်​ကိုလှည့်​ပြီး လက်​ညှိုး​လေးတစ်​​ချောင်း​ထောင်​ပြကာ
အလွမ်းက ရွဲ့တဲ့တဲ့နဲ့​ပြောခဲ့၍ မြက်​ရိုင်းရှက်​သွားမိသည်​.....ပြီးမှ တစ်​စုံတစ်​ခုကိုသတိရသွားပြီး သူမ​နောက်​သို့အ​ပြေးသွားကာ ​နောက်​ကသိုင်းဖက်​လိုက်​သည်​....
"ဟာ.....ရှင်​ ဘာလုပ်​တာလဲ လွှတ်​ ကျွန်​မအပြင်​သွားမလို့"
"မလွှတ်​ဘူး....မင်း ခုနက ကိုယ့်​ကို ဘယ်​လို​ခေါ်လိုက်​တာလဲ"
အလွမ်း သူ့​ဗိုက်​ကို တံ​တောင်​ဆစ်​နဲ့ထိုးလိုက်​ပြီး အပြင်​အမြန်​ထွက်​ကာ အ​ပေါက်​ပိတ်​လိုက်​သည်​.....တံခါးဝကိုမှီပြီး သက်​ပြင်းသဲ့သဲ့​လေး ​ချမိသည်​
​ကျေနပ်​မိသည်​.. ....မနက်​ခင်း အိပ်​ယာနိုးတိုင်း ဒီမျက်​နှာလှလှ​လေးကို ​နေ့တိုင်းမြင်​ခွင့်​ရလို့....မြက်​ရိုင်း သူမကိုကြည့်​ပြီး အမှတ်​မထင်​ သူမနဖူးလေးကို နမ်းလိုက်​စဉ်​ သူမမျက်​လုံးများက ဆက်​ကနဲဖွင့်​လာသည်​
သူ့ရင်​ဘတ်​ကိုအတင်းရိုက်​ထု​နေ​သော သူမ​လေး​ကြောင့်​ သူ စ​နောက်​ချင်​လာသည်​
"ဒါကဘာဖြစ်​တာလဲ မင်းကငါ့မိန်းမ မလို့နမ်းတာ​လေ....အသားပဲ့သွားလို့လား"
"အမယ်​!!ရှင်​နမ်းချင်​တိုင်းနမ်းရ​အောင်​ ​ရေ​မွှေးပုလင်းထင်​မ​နေနဲ့....​တောက်​...အလကား ရှင့်​မိန်းမလည်းမဖြစ်​ချင်​ဘူး...​နောက်​ဆိုကျွန်​မနဲ့​ဝေး​ဝေး​နေပါ....ပွတ်​သီးပွတ်​သပ်​လာမလုပ်​ပါနဲ့"
မြက်​ရိုင်း ခပ်​ရွဲ့ရွဲ့ပြုံးကာ သူမဆံပင်​​တွေကို ဆွဲယူလိုက်​ပြီး ရွဲ့၍နမ်းလိုက်​ကာ
"ဒီမျက်​နှာနဲ့ ဒီဆံပင်​​တွေက ငါ့အပိုင်​ပစ္စည်းပဲ....ငါလုပ်​ချင်​သလိုလုပ်​မယ်​"
လူကိုပိုင်​စိုးပိုင်​နင်းလုပ်​​နေတဲ့ သူ့​ကြောင့်​အလွမ်း​ဒေါသ​တွေ ငယ်​ထိပ်​​ရောက်​​နေပြီ.. ..
"Ok​လေ....နမ်း​ပေါ့...တစ်​ခု​တော့​ပြောမယ်​​နော်​ ကျွန်​မချမ်းလို့​ခေါင်းမ​လျှော်​တာ ၈​ရက်​ရှိ​နေပြီ"
"မနမ်းဘူး.....ဒီ​နေ့ငါ့အ​မေလိုချစ်​ရတဲ့ အန်​တီရဲ့​မွေး​နေ့ပွဲရှိတယ်​.....မင်းနဲ့လည်းမိတ်​ဆက်​​ပေးချင်​လို့....အဲ့ဒါ ​ရေချိုး​ခေါင်း​လျှော်​ပြီးလိုက်​ခဲ့"
မြက်​ရိုင်း မျက်​နှာ ခရမ်းချဉ်​သီးသုပ်​လို ရှုံ့တွသွားကာ သူမ​ရှေ့ကမြန်မြန်​ထွက်​လာခဲ့​တော့သည်​
အလွမ်း တစ်​​ယောက်​ထဲစကား​ပြောပြီး ​ခေါင်း​လျှော်​ဖို့ပြင်​လိုက်​​တော့သည်​......
ပါတီပွဲထဲမှာ အထက်​တန်းကျကျလူတန်းစား​ပေါင်းစုံ​ရောက်​​နေသည်​.....မီး​ရောင်​စုံနဲ့လှပ​နေတဲ့ ကွင်းထဲမှာ အလွမ်းကနတ်​သမီးလိုလှ​နေတာကို မြက်​ရိုင်းလက်​ခံမိပါသည်​....
"ဦး​လေး....ဒါကျွန်​​တော့်​မိန်းမ လွမ်းခ​ရေတဲ့....အလွမ်း ဒါက ကိုယ့်​ဦး​လေး ဦး​အောင်​ထိုက်​တဲ့...ဒါက ကိုယ့်​​မွေးစား​မေ​မေ ​ဒေါ်နှယဉ်​တဲ့"
​ရောက်​တုံးဆုံတုံး စကား​တွေ​ပြောပြီး​နောက်​ မြက်​ရိုင်းကအသိမိတ်​​ဆွေ​တွေနဲ့စကား​ပြောရန်​ထွက်​သွား​လေသည်​
"မဆိုးပါဘူး ဦးရဲ့ အလွမ်းသိရင်​​ပြောပါ့မယ်​"
မအားလို့ ​နောက်​ကျသွားတယ်​ sorryပါ ကို​ပေ​တေကိုနားထားရမလား😘😘
4 years ago in #artzone by sithuhtun1997 (41)
Server time: 16:05:50 Account Level: 1
Total XP: 170.85/200.00
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by sithuhtun from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.